Simba rekuchengetedza maitiro paApple Watch | Ndinobva mac
Apple yakapa simba rekuchengetedza maitiro paApple Watch
Isu tatova vhiki imwe chete kubva kuburitswa zviri pamutemo kweApple Watch uye nhau dzine chekuita nazvo dzinoramba dzichioneka kuti hapana chaunoita kunze kwekuisa mazino marefu kune avo vedu vatove kuda kuva nacho. Isu takatokuratidza pane dzinopfuura kamwe chiitiko kuti Apple, panguva iyoyo, yakangoburitsa hunhu hwewachi iyi pamusoro uye ndimo mave kunyatso kuisa nyama yese pane grill.
Unenge uri Muvhuro unotevera kana tasvika pakuziva imwe neimwe yehunhu hwayo. Tichaziva kana isina mvura, tichava nedata chairo pahupenyu hwebhatiri uye Tichaziva izvo zvavakatichengetera maererano nezvishandiso zvacho.
Nhasi tinotaura kuti zvinoita sekuti Apple yafunga kuti bhatiri remudziyo wayo ndicho chinhu chakakosha uye kuti wachi isina bhatiri inoguma kuve zvese zvazviri, wachi. Ndokusaka, pane imwe nguva, uye nemasimba mashoma kwazvo simba, iyo Apple Watch inopinda mumhepo yekuponesa uye ingotipa nguva, kusiya dzimwe sarudzo dzakadzoserwa kumashure.
Iyo New York Times yakaburitsa chinyorwa chinotaura nezve Apple Watch umo kuongororwa kweimwe neimwe yezvikamu izvo chishandiso chakapfuura chinoitwa. Muchirongwa ichi zvakasimbiswa kuti pakutanga kwayo, Apple yanga ichishanda pane akasiyana maseru ekuteedzera kwehutano ayo akazo chengetwa mudhirowa.
Nekudaro, kune zvakare kutaura nezve nzira yekushanda iyo Apple haina kutumidza zita mukuratidzwa kweApple Watch iyo yavanodaidza kuti "Power Reserve". Mune ino modhi, vashandisi vanozokwanisa kuona iyo nguva, asi vasingadyidzane nezvimwe zvinhu, nekudaro vachivimbisa kuti hatina chidimbu chakakosha chesimbi inert pachiuno chero nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple yakapa simba rekuchengetedza maitiro paApple Watch
Josito XSmusic akadaro
Ndinozviona zvakanyatsobatana chokwadi
Pindura Josito XSmusic
Trick: otomatiki batanidza kunetiweki yako anotyaira paunotangazve yako Mac
DaysiDisk inokubatsira nekuchenesa Mac yako